Imiboniso bhanyabhanya oza kuyibona ngaphambi kokuba uye eParis ukuze usazi ngcono isixeko | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 09/06/2021 11:49 | isiko, EParis
Ukuba uyazibuza ngeemovie ukuze ubone ngaphambi kokuya eParis, kungenxa yokuba uceba uhambo oluya kwikomkhulu laseFrance. Awuyi kuzisola ngomnxeba Isixeko sokuKhanya Yeyona intle kwihlabathi. Izele ngamatye ezikhumbuzo kunye namabali aqhelekileyo aya kukutsala umdla, kodwa sisixeko sanamhlanje esinayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ungenakulibaleka.
Nangeyiphi ndlela, Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis ukuba siza kucaphula uya kukunika umbono ohlukileyo wesixeko saseSeine. Ngabo, unokuyihlola ngaphambi kokushiya ikhaya kwaye ufumane iikona, mhlawumbi, ubungazi nokuba zikhona. Kodwa eli ayiloxesha lokuba sandise, ngaphandle kokuqhubeka, siza kuphakamisa imiboniso bhanyabhanya ukuze ibonwe ngaphambi kokuya eParis.
1 Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis, ukhenketho lwedolophu
1.1 I-Hunchback yeNotre Dame
1.2 UMarie Antoinette, enye imovie yokuyibona ngaphambi kokuya eParis ukuya kufunda ngembali yayo
1.5 Amelie, iklasikhi phakathi kweemovie ukubona ngaphambi kokuya eParis
1.6 Ubomi ngepinki
1.7 URatatouille, igalelo loopopayi kwimiboniso bhanyabhanya ukuze babone ngaphambi kokuya eParis
Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis, ukhenketho lwedolophu
Ukhenketho lwethu lweyona bhanyabhanya isetiweyo eParis iya kukusa kumaxesha adlulileyo apho uya kufunda khona ngembali yawo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku, ukuze ufumane ukuba ziyintoni ezo ndawo zizele ngumtsalane ezingabonakali kwizikhokelo zabakhenkethi. Masihambe neetheyiphu esizicebisayo.
Ngokusekwe kwinoveli engaqhelekanga UMama wethu waseParis omkhulu UVictor Hugo, ngaphezulu kwemovie enye kukho ezininzi. Mhlawumbi eyona ithandwayo yinguqulelo yoopopayi eveliswe nguDisney ngo1996. Kusithatha sibuyele kumaxesha aphakathi ukubalisa ibali le-hunchback Quasimodo kunye ne-gypsy entle u-Esmeralda, ababandakanyeka kwicebo lothando, inzondo nokuziphindezela.
Konke oku kunye neNotre Dame, icawa engumfuziselo eParis, njengendawo ephambili. Ngamafutshane, ibali elihle elingenabo abalinganiswa ababi abaye baziswa kwisikrini esikhulu amaxesha amaninzi.
Ukuba ukhetha ukubona ingxelo kunye nabadlali bokwenyani, umzekelo unesimumu UMama wethu waseParis, ukusukela ngo-1923 kwaye yayalelwa nguWallace Worsley. Iitoliki zakhe zazinjalo Lon chaney njengoQuasimodo kunye noPatsy Ruth Miller njengo-Esmeralda. Nangona kunjalo, ukuba ufuna uguqulelo lwesandi, sicebisa ukuba umboniso bhanyabhanya wenqaku elifanayo wadutyulwa ngo-1956 nge U-Anthony Quinn kwindima ye-hunchback kunye noGina Lollobrigida njengo-Esmeralda. Kule meko, isikhokelo yayingumFrentshi uJean Delannoy.
UMarie Antoinette, enye imovie ukuyibona ngaphambi kokuya eParis ukuya kufunda ngembali yayo
Ibali lomfazi ongonwabanga ka ULouis XVI waseFrance ikwaziswa nakwisikrini esikhulu amaxesha amaninzi. Siphakamisa ukuba uhlobo olujolise kwi-2006 nguSofía Coppola ngokuchanekileyo ngesihloko se UMarie Antoinette. Nangona ijolise kubomi benkosikazi, ikwayindlela entle kakhulu Yazi inguquko eParis yangasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMXUninzi lwezikhumbuzo zazo zisemi kwaye uya kuba nakho ukuzibona kuhambo lwakho oluya esixekweni.
Indima ye-aristocrat engalunganga idlalwe ngu UKristen dunst, ngelixa eyomyeni wakhe, inkosi, ephethe uJason Schwartzman. Amanye amanani anje ngoJudy Davis, Rip Torn okanye Asia Argento bagqibezela umdlalo wefilim ofumene i Oscar ngoyilo lwempahla elungileyo.
Nangona kunjalo, ukuba ukhetha umboniso bhanyabhanya odala, sicebisa ukuba uvela ngo-1939, obizwa ngokuba ngumxholo UMarie Antoinette. Yayikhokelwe nguWoodbridge S. Van Dyke, ophumelele ii-Oscars ezimbini ze Isidlo sangokuhlwa sommangalelwa y San Francisco. Bona ke iitoliki, UNorma Shearer wadlala ukumkanikazi, ngelixa uRobert Morley wayedlala uLouis XVI kunye noTyrone Power badlala u-Axel von Fersen, owayecingelwa ukuba ngumthandi wenkosi.
Ipowusta 'yeLes Misérables'
Ikwasekwe kwinoveli engaziwayo ngo UVictor Hugo, Omnye wababhali oyifumene kakuhle iParis yexesha lakhe, usiwe kwimiboniso bhanyabhanya nakumabonwakude amaxesha amaninzi. Umculo obethwayo wade wadalwa ngokusekwe kumdlalo.
Inguqulelo esiza nayo apha yile ikhokelwe ngo-1978 nguGlenn Jordan kwaye wenza inkwenkwezi URichard Jordan kwindima kaJean Valjean, UCaroline langrishe njengoCosette kunye U-Anthony Perkins njengoJavert. Ekuhambeni kwefilimu sibona iziqendu zembali yeParis ezinje nge Inguquko ye-1830 kwaye, ngokubanzi, kubomi bemihla ngemihla kwisixeko saseSeine ngelo xesha.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukukhetha njengemovie ukuba ubone ntoni ngaphambi kokuya eParis Iimbandezelo Olunye uguqulelo, unokukhetha olwakhutshwa ngo-1958. Kule meko, umphathi yayinguJean-Paul Le Chanois kunye neetoliki. UJean Gabin, UMartine Havet noBernard Blier.
Inketho yesithathu yile ifotwe kumabonwakude njengeenkonzo zikaJosée Dayan. UJean Valjean wayemelwe ngu UGérard Depardieu, ngelixa uCosette edlalwa ngu Virginie Ledoyen kunye noJavert nguJohn Malkovich.
Ukuba iimovie zangaphambili zikubonise imbali yaseParis, Moulin Rouge ikwazisa kwakhona kumoya we-bohemian wesixeko ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, yendawo yobugcisa ye Montmartre, apho i-cabaret eyaziwayo enika ifilimu isihloko sayo isemi nanamhlanje.
Lo mboniso bhanya-bhanya wawukhokelwe ngu-Baz Luhrmann kwaye wakhululwa ngo-2001. Ubalisa ibali lombhali oselula oliNgesi owayefudukela kwisixeko saseSeine, watsaleleka ngqo kubugcisa bakhe bohemianism. EMoulin Rouge uya kudibana nabantu bokwenyani abanjengomzobi Toulousse Lautrec, kodwa ngumdanisi uSatine, aza kuthandana naye.
Yifilimu yomculo eya kuthi ikunike ulwazi olubalulekileyo ukuze ulufumane ummandla waseMontmartre kwaye kufuneka ubone phi xa usiya eParis. Kodwa sikucebisa ukuba uhoye isandi sayo esinamandla, esiquka ukubetha okukhulu ukumkanikazi, Elton John o Nirvana.
Amélie, iklasikhi phakathi kweemovie ukubona ngaphambi kokuya eParis
IiMill ezimbini zeKofi
Lo mboniso bhanya-bhanya, nawo owakhutshwa ngo-2001, uyinxalenye yeklasikhi phakathi kwezindululo ze-cinematographic zokuzibona ngaphambi kokuya eParis. Ngumdlalo wothando ohlekisayo okhokelwa nguJean-Pierre Jeunet kwaye wenziwa ngu Audrey tatoo.
Uzibeka ezihlangwini zikaweyitala osebenza kwi IiMill ezimbini zeKofi kwaye ufumana injongo ebomini bakhe xa egqiba ukunceda abanye ukuba babenze bonwabe. Ifilimu iphumelele amabhaso amane eCesar kwaye yonyulwa kwii-Oscars ezininzi, nangona ingakhange ifumane nto. Kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto, ngumboniso bhanyabhanya omnandi ofumene impumelelo enkulu yoluntu.
Kukwagqibelele ukwazi Montmartre, apho ikhefi apho u-Amelie asebenza khona. Kodwa, ngokungafaniyo naleyo yangaphambili, ubumelwane esibubonayo kuyo ngoku. Ukuba uhambela eParis, usenokusela nakwiCafé de Los Dos Molinos.
Imvumi uEdith Piaf
Ukuba iFrance ngokubanzi kunye neParis ngokukodwa banophawu kwihlabathi lengoma, kunjalo UEdith Piaf, owazalelwa kwisixeko saseSeine. Ifilimu ibalisa, ngokuchanekileyo, ubomi bomculi ukususela ebuntwaneni bakhe kwindawo ehluphekileyo yesixeko esikhulu kude kube yimpumelelo yehlabathi lakhe.
Ekhokelwa ngu-Olivier Dahan, yaqala ngo-2007. Kodwa ukuba kukho into ebalaseleyo ngayo, yindlela entle yokusebenza Marion Cotillard kwindima yemvumi. Ngapha koko, wayifumana U-Oscar weyona Actress ibalaseleyo ngokwentsebenzo yakhe, ukongeza kokunye okuninzi okuqondwayo.
Ukuzibandakanya naye kwisamente nguGerard Depardieu njengoLouis Leplée, usomashishini kwezomculo owafumanisa uPiaf; UClotilde Courau kwindima kamama wegcisa kunye noJean-Pierre Martins njengembethi manqindi uMarcel Cerdan, owayethandana nengoma yediva.
Ratatouille, igalelo loopopayi kwiifilimu ukuze babone ngaphambi kokuya eParis
Njengoko usazi kakuhle, iParis inamashumi eminyaka ibiyindawo ye Eyona ndawo ityiwayo emhlabeni. Esi sisiseko sale filimu esiphelisa ngayo ukhenketho lwethu lweefilimu ukuze sizibone ngaphambi kokuya eParis.
URemy ngumlingwane oza kwisixeko saseSeine ukuze azalisekise iphupha lakhe lokuba ngumpheki omkhulu. Ukwenza oku, kwaziswa kwifayile ye- Ivenkile yokutyela kaGusteau, isithixo sakhe esikhulu. Apho uyakusebenzisana nesitya sokuhlamba isitya esilula ukwenza isuphu enempumelelo kuyo yonke iParis. Kuqala njalo ukuzonwabisa kweentonga zesinye.
Yiyo Ifilimu yoopopayi yaveliswa nguPstrong yaza yakhutshwa ngo-2007. Nangona umlawuli wayo wayeza kuba nguJan Pinkava, kodwa ekugqibeleni Intaka eyiBrad kwaye, ngenxa yedubbing, yayinabalinganiswa besimo se UPeter O'Toole kunye nomhlekisi UPatton Oswalt. Kwakhona, phakathi kwamanye amabhaso amaninzi, wafumana U-Oscar weFilimu eQhelekileyo yoPhilayo. Okokugqibela kuyamangalisa umbono we Eyona ndawo yayisemehlweni omntu ukusuka eParis inokubonwa kwesinye seziganeko zakhe.
Ukuqukumbela, sicebise ezinye ze Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis ukwazi ikomkhulu laseFrance ngcono. Nangona kunjalo, ezinye ezininzi ziyacetyiswa. Umzekelo, Umtsalane, no-Audrey Hepburn noCary Grant behamba-hamba kunxweme lwaseSeine; EParis, paris, Abalinganiswa babo abaphila kwindawo yemidlalo yeqonga edolophini ukuze benze umculo wabo, okanye Ayinakuchukumiseka, Esibonisa ukubaluleka kobuhlobo, kodwa kunye nosizi lwabasebenzi abasebenza esixekweni esikhulu. Kwaye, xa usiya, ukujikeleza isiXeko sokuKhanya, ungafunda Oku kubhaliwe neengcebiso zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » I dolophu » EParis » Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eParis